London Munaasibada 1 Luulyo Tarsan : Madaxda Dawladdu ma Gutaan waajibaadkooda | KEYDMEDIA ONLINE
London Munaasibada 1 Luulyo Tarsan : Madaxda Dawladdu ma Gutaan waajibaadkooda
LONDON (KON) – Gudoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur "Tarsan" oo munaasibadda 1 Luulyo ka hadlay ayaa waxuu ka hadlay xaaladda Guracan ee u Dalku Maantay marayo, waxuuna sheegay in uu ka walwalsanyahay in aysan jirin Wasiiro, Xildhibaanada iyo Dowladda Waajibaadkoodka loo igmaday gudata.
Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa muujiyey in aan la kala aqoonsan Xildhibaanada iyo Wasiirada in ay ka shaqeeyaan Qaranimada Soomaaliyeed iyo in ay ku shaqeeyaan Siyaalo kale oo lid ku ah Danaha Bulshadda Soomaaliyeed.
Gudoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay danaha gaarka ah in laga horumariyo guud ee Umadda Soomaaliyeed waayo daneysiga Gaarkaa meel laguma Gaarayo oo Taariiqdu wey idin xukumin.
Munasibaddan ay ka hadleen Tarsan iyo Mudanayaal iyo Marwoyin qimo badan ee ku nool Magaalada London ayaa waxay ku aadaneyd 1dii Luulyo waxaa si Xaladda leh u soo Agaasimay Heyadda Somali Support Alliance ee Xarunteedu tahay White City Estate Shepherd's Bush ee Magaaladda London.
Wa Xafladda si waanaagsa lo soo Agaasimay oo na farxad galineysa in aad xasuusano Maalintaan Qiimaha weyn u leh Qof kasta oo Soomaali ah sidaas waxaa yiri Dr. C/qadir Boolay oo ah Aruuriyaha Taariikhda S.Y.L.